Super Meat Boy Forever – Internet Journal |
May 10, 2019Comments Off on Super Meat Boy Forever046
Console နဲ့ ကစားရင် ပိုကောင်းမယ့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဂိမ်းသစ်လေးတစ်ခုနဲ့ အခုတစ်ပတ် မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Wins စနစ်ရော iOS အပါအ၀င် Linux, Android တွေနဲ့ပါ ကစားနိုင်မှာပါ။ Console အစုံနဲ့ ရနိုင်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပြီး Nintendo Switch, PS4, Xbox One စတဲ့ တန်းမြင့် Set အစုံနဲ့ ကစားနိုင်ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်ရေး ဂိမ်းဆန်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် တကယ်တော့ စခန်းသွားအနေနဲ့ ကစားရမှာပါ။ ဇာတ်ကောင်လေးတွေက လူသားမကျစက်ရုပ်မကျ ဇာတ်ကောင်ငယ်လေးတွေပါ။
Single အနေနဲ့ပဲ ကစားနိုင်မယ့် အားနည်းချက်တစ်ခုတော့တွေ့ပေမယ့် လူငယ်ရောလူကြီးပိုင်း ကစားသူတွေပါ သဘောကျစေနိုင်မယ့် ဂိမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ရန်သူက Dr. Fetus ပါ။ သူက Meat Boyနဲ့ ဇနီးသည် Bandage Girl တို့ရဲ့ကလေးလေး ဖြစ်တဲ့ Nugget ကို ပြန်ပေးဆွဲ သွားတယ်။ ဒီတော့ Meat Boy က သူ့သားအတွက် လိုက်ပြီး ရှာဖွေ ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Meat Boy တစ်ယောက်တည်းနဲ့တော့ ဒေါက်တာဖီတက်ရဲ့ စခန်းကိုဝင်ရောက်ပြီး သားငယ်လေးကို ပြန်ခေါ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ Meat Boy ရော Bandage ပါ နှစ်ယောက်ပေါင်ပြီး ရန်သူကို ရင်ဆိုင်မှာပါ။ စခန်းသွားတလျှောက် ထောင်ချောက်တွေရှိမယ်၊ အစောင့်တွေရှိမယ်၊ ကစားသူက ခုန်နိုင်မယ်၊ ရန်သူကိုကန် နိုင်ထိုးကျိတ် တိုက်ခိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်ချောက်တွေကို ကျော်ဖြတ်တဲ့အခါချိန်သားကိုက် ခုန်ထွက်နိုင်မှသာကျော် ဖြတ်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို တစ်ဖက်က ရန်သူအစောင့်တွေနဲ့ တွေ့ရင်လည်း ချက်ချင်းထိုးကျိတ် တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အခုဂိမ်းမှာထူးခြားချက် တစ်ခုရှိတာလေး ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့နောက်တစ်ဆင့် တက်ရောက်ကစားမှုမှာ တစ်ဆင့်ချင်းမသွားဘဲ ကစားသူရဲ့ ကစားနှုန်းကိုကြည့်ပြီး တစ်ဆင့်အောင်လို့ နောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ရင် ပိုခက်တဲ့အဆင့်ကို ချက်ချင်းရောက်သွားနိုင်သလို ပုံမှန်အဆင့် ၁ ကနေ အဆင့် ၂ ကို တက်ရောက် ကစားရတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကစားသူရဲ့ ကစားပုံ ဆရာကျရင်တော့စပြီး ကစားချိန်အဆင့် ၁ မှာ ကစားရပေမယ့် အဲဒီအဆင့် အောင်ပြီးရင့် အဆင့် ၅ ကိုလည်း ချက်ချင်းရောက်သွားနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းက အနိုင်ရဖို့အတွက် တိုက်ခိုက်မှုထက် ချိ်န်သားကိုက်ခုန်နိုင်မှု၊ ထောင်ချောက်တွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မှုက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုကတော့ အရေးမကြီးလှပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ထောင်ချောက်တွေကို ကျော်ဖြတ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မှာ ဖြစ်ဖြစ် Nugget ကို ထိခိုက်မှုရှိစေမယ့်၊ Nugget ရှိနေတဲ့ နေရာကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိစေမယ့် လုပ်ဆောင် တိုက်ခိုက်မှုမျိုး မလုပ်မိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ အဓိက ဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ Nuggetကို ကယ်တင်မယ့် အစီအစဉ်ပျက်ပြီး ဂိမ်းကရှုံးနိမ့်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုန်နဲ့ တိုက်ခိုက်မှု ခလုတ် ၂ ခုပဲ သုံးရမှာဖြစ်လို့ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကစားနိုင်မယ့်ဂိမ်းလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ခက်ခဲတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ထည့်ထားလို့ အစကနေအဆုံးထိအောင် အနိုင်ရဖို့ ဆရာကျတဲ့ ကစားသမားတစ် ယောက်အနေနဲ့တောင် အချိန် ၃ နာရီကျော်ထိအောင် ပေးရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ် လာပါပြီ။ သင်ရော အချိန်ဘယ် လောက်ကြာမှာ Nugget ကို ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်မှာလဲ…? စမ်းကစားကြည့်ရအောင်။
Console နဲ့ ကစားရငျ ပိုကောငျးမယျ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဂိမျးသဈလေးတဈခုနဲ့ အခုတဈပတျ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Wins စနဈရော iOS အပါအဝငျ Linux, Android တှနေဲ့ပါ ကစားနိုငျမှာပါ။ Console အစုံနဲ့ ရနိုငျတယျလို့ ဆိုနိုငျပွီး Nintendo Switch, PS4, Xbox One စတဲ့ တနျးမွငျ့ Set အစုံနဲ့ ကစားနိုငျပါတယျ။ တိုကျခိုကျရေး ဂိမျးဆနျတယျလို့ ဆိုနိုငျပမေယျ့ တကယျတော့ စခနျးသှားအနနေဲ့ ကစားရမှာပါ။ ဇာတျကောငျလေးတှကေ လူသားမကစြကျရုပျမကြ ဇာတျကောငျငယျလေးတှပေါ။
Single အနနေဲ့ပဲ ကစားနိုငျမယျ့ အားနညျးခကျြတဈခုတော့တှပေ့မေယျ့ လူငယျရောလူကွီးပိုငျး ကစားသူတှပေါ သဘောကစြနေိုငျမယျ့ ဂိမျးလေးဖွဈပါတယျ။ အဓိက ရနျသူက Dr. Fetus ပါ။ သူက Meat Boyနဲ့ ဇနီးသညျ Bandage Girl တို့ရဲ့ကလေးလေး ဖွဈတဲ့ Nugget ကို ပွနျပေးဆှဲ သှားတယျ။ ဒီတော့ Meat Boy က သူ့သားအတှကျ လိုကျပွီး ရှာဖှေ ပွနျလညျ ချေါဆောငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Meat Boy တဈယောကျတညျးနဲ့တော့ ဒေါကျတာဖီတကျရဲ့ စခနျးကိုဝငျရောကျပွီး သားငယျလေးကို ပွနျချေါဖို့ မလှယျပါဘူး။ Meat Boy ရော Bandage ပါ နှဈယောကျပေါငျပွီး ရနျသူကို ရငျဆိုငျမှာပါ။ စခနျးသှားတလြှောကျ ထောငျခြောကျတှရှေိမယျ၊ အစောငျ့တှရှေိမယျ၊ ကစားသူက ခုနျနိုငျမယျ၊ ရနျသူကိုကနျ နိုငျထိုးကြိတျ တိုကျခိုကျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ထောငျခြောကျတှကေို ကြျောဖွတျတဲ့အခါခြိနျသားကိုကျ ခုနျထှကျနိုငျမှသာကြျော ဖွတျနိုငျမှာ ဖွဈသလို တဈဖကျက ရနျသူအစောငျ့တှနေဲ့ တှရေ့ငျလညျး ခကျြခငျြးထိုးကြိတျ တိုကျခိုကျနိုငျဖို့ လိုအပျပါတယျ။
အခုဂိမျးမှာထူးခွားခကျြ တဈခုရှိတာလေး ပွောပွခငျြပါသေးတယျ။ အဲဒါကတော့နောကျတဈဆငျ့ တကျရောကျကစားမှုမှာ တဈဆငျ့ခငျြးမသှားဘဲ ကစားသူရဲ့ ကစားနှုနျးကိုကွညျ့ပွီး တဈဆငျ့အောငျလို့ နောကျတဈဆငျ့တကျရောကျရငျ ပိုခကျတဲ့အဆငျ့ကို ခကျြခငျြးရောကျသှားနိုငျသလို ပုံမှနျအဆငျ့ ၁ ကနေ အဆငျ့ ၂ ကို တကျရောကျ ကစားရတာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ကစားသူရဲ့ ကစားပုံ ဆရာကရြငျတော့စပွီး ကစားခြိနျအဆငျ့ ၁ မှာ ကစားရပမေယျ့ အဲဒီအဆငျ့ အောငျပွီးရငျ့ အဆငျ့ ၅ ကိုလညျး ခကျြခငျြးရောကျသှားနိုငျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဂိမျးက အနိုငျရဖို့အတှကျ တိုကျခိုကျမှုထကျ ချြိနျသားကိုကျခုနျနိုငျမှု၊ ထောငျခြောကျတှကေို ကြျောဖွတျနိုငျမှုက ပိုအရေးကွီးပါတယျ။ တိုကျခိုကျမှုကတော့ အရေးမကွီးလှပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ထောငျခြောကျတှကေို ကြျောဖွတျခြိနျပဲဖွဈဖွဈ ရနျသူကိုတိုကျခိုကျခြိနျမှာ ဖွဈဖွဈ Nugget ကို ထိခိုကျမှုရှိစမေယျ့၊ Nugget ရှိနတေဲ့ နရောကို ထိခိုကျပကျြစီးမှုရှိစမေယျ့ လုပျဆောငျ တိုကျခိုကျမှုမြိုး မလုပျမိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ မဟုတျရငျတော့ အဓိက ဦးတညျခကျြဖွဈတဲ့ Nuggetကို ကယျတငျမယျ့ အစီအစဉျပကျြပွီး ဂိမျးကရှုံးနိမျ့မှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခုနျနဲ့ တိုကျခိုကျမှု ခလုတျ ၂ ခုပဲ သုံးရမှာဖွဈလို့ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကစားနိုငျမယျ့ဂိမျးလေးပါ။ ဒါပမေဲ့ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ခကျခဲတဲ့ စိနျချေါမှုတှေ ထညျ့ထားလို့ အစကနအေဆုံးထိအောငျ အနိုငျရဖို့ ဆရာကတြဲ့ ကစားသမားတဈ ယောကျအနနေဲ့တောငျ အခြိနျ ၃ နာရီကြျောထိအောငျ ပေးရမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ နညျးနညျးစိတျဝငျစားစရာဖွဈ လာပါပွီ။ သငျရော အခြိနျဘယျ လောကျကွာမှာ Nugget ကို ပွနျလညျကယျတငျနိုငျမှာလဲ…? စမျးကစားကွညျ့ရအောငျ။
Previous PostUbuntu OS တွင် Deluge ကို ထည့်သွင်းခြင်း
Next PostBasic Kindle 2019